Nin Hargeysa 20-sanno ku xidhnaa oo 15-kun-dollar lagu Wareejiyay. |
Nin Hargeysa 20-sanno ku xidhnaa oo 15-kun-dollar lagu Wareejiyay.
Hargeisa(GNN):-Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon, guddoomiyaha Kaalme-kuwan, ayaa lacag dhan shan iyo toban kun oo dollar guddoonsiiyay, Maxamed Muuse Gamteesa, oo ahaa maxbuus muddo 20-sanno ah ku xidhna xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa.
Cabdimaalik ayaa sheegay in lacagtan lagu soo hagaajiyay kaalme kuwan, oo ah barnaamij warbaahineed Samafal ah.
Sidoo kale Samafale Coldoon ayaa hoosta ka xariiqay in ay mar hore ku wareejin lahaayeen Maxamed Muuse lacagtan, balse ay ka soo dhex gashay arrin qoys.
Dhanka kale Samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa uga mahad celiyay bulshada lacagtani soo ururisay meelkasta oo ay joogaan.
Coldoon isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa uu yidhi. “Maanta waxaa aanu halkan ku guddoonsiinayna maxbuuskii 20-ka sanno xidhnaa ee soo baxay laba toddobaad ka hor, waxaanu halkan ku guddoonsiinayna lacag gaadhaysa 15-kun oo dollar, isla markaana ay soo direen walaalo samafalayaal ah, oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba jooga, ILLAAHEY kheyr haku abaal mariyo.
Waxaa ay lacagtaasi u soo direen walaalkeen si ay garab u siiyaan, maadama uu muddo dheer xidhnaa una baahan yahay in uu nolol cusub bilaabo, dadkaasi oo kuwana aanu garanayno kuwana aanan garanayn, isla markaana go’aansaday in walaalkood garab siiyaan.
Lacagta waxaa lagu soo haggaajiyay annaga oo ah kaalme kuwan, oo ah barnaamij warbaahineed Samafala, kana shaqeeya is tuska dadka danyarta ah iyo inta ladan ee wax bixinaysa.
Muddo hore ayaanu ku wareejin lahayn balse waxa jira arrin kaas oo ah in xaaskiisi isaga oo jeelka ku jira inta ay umushay ay umul aroortay, ilmihii yaraa ayaa hawshiisa sidii loo heli lahaa aanu ku gudda jirnaa, boqolkiiba konton waanu xaqiijinay, oo caddaymo ayaanu isu gaynay, ilmahaa yar gabadh ayuu ahaa sida uu noo sheegay imika magaalada Hargeysa ayay ku sugan tahay, inta inanta yar arrinkeedu caddaanaya maxkamaddo iyo DNA ayuu mari doonaa “
Maxamed Muuse Gamteesa, ayaa Kaalme Kuwan iyo bulshada dalka gudihiisa iyo dibadiisaba uga mahad celiyay sida ay uga farxiyeen una soo caawiyeen. “Walaalkay ii hawl galay ee ii shaqeeyay waan soo dhawaynayaa ILLAAHEY kheyr ha siiyo janatul Fardowsana waan ugu ducaynayaa, walaalkayga shan iyo tobanka kun ee dollar i siiyay, shan kun iska daaye maan filayn lacagta intan le’eg”